We She Me: Iron Man ထူး
ko9- 1/16/11, 1:02 AM
Anonymous - 1/16/11, 2:22 AM
နောက်ဆုံးပုံက တကယ့် ကိုအန်ဒီအသေးစားလေးပဲ။ ကလေးတွေအကြောင်းမဖတ်ရတာကြာလို့လွမ်းနေတာ။ စာပြန်ရေးတာဝမ်းသာတယ်..ကျောင်းရယ်အလုပ်ရယ် ကလေး၂ယောက်ရယ်ဘလော့ရယ် အချိန်မျှတတ်တဲ့ ကိုအန်ဒီနဲ့သူမကို တကယ်အားကျမိတယ်။ များများရေးနိုင်ပါစေဆုတောင်းတယ်...။
Shinlay - 1/16/11, 3:30 AM
Iron Man ထူး ကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါ။
nu-san - 1/16/11, 3:41 AM
သားနဲ့ သမီးအကြောင်းလေးတွေ မျှော်နေတာပါ.. မောင်နှမ ၂ ယောက်ရှိတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဖော်လုပ်ပြီးကစားလို့ရတာပေါ့နော်.. ကိုထူးက ယောင်္ကျားလေး သဘာဝအတိုင်း ဆော့တတ်တာရယ် သမီးက မိန်းကလေး သဘာဝအတိုင်း စာလေးဖတ်လိုက် ပုံလေးတွေ ချယ်လိုက်နဲ့..အရမ်းကို ချစ်ဖို့ကောင်းကြတာပဲ..
ကိုထူးလေးတောင် ဘာလိုလိုနဲ့ကို ၃ နှစ်ပြည့်တော့မယ်... :) သမီး မြတ်နိုး က ၄ နှစ်ပြည့်ဖို့ ၂ လအလိုပေါ့..
Nyi Linn Thit - 1/16/11, 9:20 AM
သားက ထွင်ပြီးကစားတတ်တာ သဘောကျတယ်၊ ဘာပဲပြောပြော သူလိုချင်တာကို ရှိတာနဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တာ ကောင်းတာပေါ့၊
ကျနော့်သားလည်း imagination တွေနဲ့ ထွင်လေ့ရှိတယ်၊လောလောဆယ် တော့ သူ Chugginton ရထားလေးတွေကို ကြိုက်နေတယ်၊ ကျနော်တို့လည်း တနေ့တနေ့ သူ့ကျောင်းကပြန်လာရင် အဲဒီ ရထား DVD တစ်ခုခုဖွင့်ထားပေးပြီးမှ ချက်ပြုတ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်၊ ကြည့်ချိန်ကိုတော့ ၁ နာရီထက် မကျော်အောင် သတိထားပြီး limit သတ်မှတ်ပေးထားတယ်၊
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) - 1/16/11, 11:13 AM
ညီမ တူလေးက ပါရိန်းဂျားနဲ့ စူပါမဲန်း ခရေဇီ..
စူပါမဲန်း အင်္ကျီဝယ်ခိုင်းလို့ ၀ယ်ပေးတော့ အဲဒါဝတ်ပြီး တိုက်ပေါ်က ခုန်ချမယ် ပြောတယ်.. ၃နှစ်ကျော် ကလေးလေးက
ဒါကြောင့် သူတို့ကြည့်တို့ဇာတ်ကားတွေက သူတို့လေးတွေရဲ့စိတ်ကို တော်တော်လွှမ်းမိုးနိုင်တာကို သတိထားမိရတယ်..
ရွှန်းလဲ့ - 1/16/11, 3:49 PM
မီးမီးအကြောင်းလည်း ရေးပါအုံး.... :)
JUSTICE999BURMA - 1/16/11, 7:21 PM
ဟုတ်ပါ့ မဖတ်ရတာ ကြာပြီပဲ... ဖြူစင်တဲ့ အရွယ်လေးတွေ လုပ်သမျှ ညစ်ထေးမှုမရှိ... အရိုးခံလေးတွေ.. (အပူအပင်ကင်းတဲ့ ကလေးလေး ဘ၀ကို တစ်ခါပြန်ပြီး ရချင်သေးတယ်)
rose - 1/17/11, 2:07 AM
ချစ်စရာလေး သားသားက။ အတောင်ပံ အဖြူကိုလည်း ကျောမှာ တပ်ထားတယ်။ အောက်ဆုံးက ပုံလေးမှာ ဗိုက်ကိုလည်း ရှေ့ပစ်ထားသေးတယ် ပီားးပိာ ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ ကိုအန်ဒီတို့ သားလေးကး)
စန္ဒကူး - 1/17/11, 12:07 PM
Andy Myint - 1/17/11, 9:58 PM
ဟုတ်တယ် Ko 9. တခါတလေ ကလေး ကစားစရာ တွေ ကလေး ပစ္စည်း တွေမှာ လူကြီးတွေ ကြိုက်လွန်းလို့ ၀ယ်လာတာတွေ ရှိသေးတယ် အဟီး
ဆက်လက် အားပေးနေတယ် ကြားလို့ ၀မ်းသာပါတယ် မဝေတိုး။ သားက ကြီးလာလေ အဖေ တူလေပဲ။
ဟယ်လို မရှင်လေး .. အမပို့သတဲ့ မေတ္တာ ကြောင့် ကလေးတွေ ကျန်းမာ ပါတယ်။
ဟုတ်တယ် မနုစံ သူတို့က ကိုယ့်ဘာကိုယ်လည်း ဆော့တတ်တယ်။ နှစ်ယောက်ပေါင်းလည်း ဆော့တယ်။ အားအားရှိ ဆော့နေတာပဲ။ အမ သမီးလေး အတွက်လည်း Happy Birthday ပါ။
ယောက်ျား ကလေးတွေက ထွင်တတ်၊ မိန်းကလေးတွေက အာရုံ စူးစိုက်တတ်တာ သတိထားမိတယ် ကို Nyi Linn Thit ။ သူတို့ကိုလည်း တီဗွီ အကြည့် မများအောင် သတိထားနေရတယ်။ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ မျက်လုံး ထိခိုက်မှာ စိုးလို့ရယ် တခြား စာဖတ်တာတွေ မလုပ်မှာ စိုးလို့ရယ်။
ကလေးတွေကတော့ ဒီလိုပါပဲ ချော။ လူကြီးတွေတောင် စိတ်မှာ အလွှမ်းမိုး ခံရတတ်တာ ဆိုတော့။ သတိထားတော့ စောင့်ကြည့်နေရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၃ နှစ်ပြည့်တော့မယ် မရွှန်းလဲ့။ မြတ်နိုးအကြောင်းလည်း ရေးပါဦးမယ်။
ဒီအရွယ် ကလေးတွေကတော့ တကယ့်ကို အပူအပင် ကင်းတယ် JUSTICE99BURMA ။ ကျောင်းတတ်လို့ အလယ်တန်း မရောက်ခင်ထိပေါ့။
အဲဒီ အတောင်ပံက တကယ်ဆို မိန်းကလေးတွေ အတွက်လေRose ။ သားကတော့ အတောင်ပံ ပါရင် ပျံလို့ ရတယ် ဆိုပြီး တပ်ထားတယ်။ သူ့ စိတ်ကူး နဲ့ သူပေါ့။ သားက ဗိုက်ပူတာက အစ အဖေနဲ့ တူတယ် အဟီး။
မျှော်လင့်ရတာပဲ စန္ဒကူး။ ယောက်ျားလေးတွေက ဆော့ဖို့ဆိုရင်တော့ ရတယ်။ သိနေတယ်လေ။
Law Shay - 2/9/11, 11:38 PM
You let your son watchaPG-13 (Parental Guidance strongly advised, no admission for ages under 13 without parents) show (i.e. Iron Man 2) ? Oh my Buddha !!!
Andy Myint - 2/13/11, 8:14 PM
Thanks for your concern, Ko Law Shay. As parents, we do know which scene is scary or inappropirate for kids and we do skip them.
Anonymous - 6/22/11, 5:44 AM
ကိုအန်ဒီရေ ကျွန်တော် Myanmar Blog Reader မှာ အစ်ကို့ ရဲ့ အလှမပျက်အ၀မပျက်လေးတွေ့ လို့ နိပ်လိုက်တာ မရှိတော့ ဘူး တဲ့ဆင်ဆာမိသွားတာလားပာင် :D
စံပယ်ပန်း - 10/27/12, 3:40 PM
ဘလော့ရေးတာ ဘာလို့နားထားတာလဲ ခင်ဗျ..။ တစ်နှစ်ကျော်နေပြီ..။ တစ်နေ့တက်လာနိုး၊ တစ်နေ့တက်လာနိုးနဲ့ ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ ချိတ်ပြီး စောင့်နေတာ..။
ဘလော့အသစ်ရေးတာရှိသလား..။ ရှိရင်လည်း လိပ်စာပေးပါဦး ခင်ဗျ..။